यस्ता छन् क्यान्सरका ७ लक्षण : कसरी गर्ने उपचार ? हेर्नुहाेस - ।। Naya Kuro ।।
२५ माघ २०७६, शनिबार ०६:४८ February 8, 2020 Naya KuroLeaveaComment on यस्ता छन् क्यान्सरका ७ लक्षण : कसरी गर्ने उपचार ? हेर्नुहाेस
जीवनको सबैभन्दा ठूलो सत्य हो मृत्यु। तर हामी जिन्दगीलाई अमर जस्तै मानेर छणिक रमाइलोमा आफैंलाई बिर्सन्छौं। त्यसैले सानो लापरबाहीले गर्दा मृत्युसँग सम्झौता गर्न पुग्छौं। त्यही लापरबाहीका कारण क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोगले जन्म लिन्छ।
क्यान्सरबाट बर्सेनी विश्वमा करिब ८० लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको विभिन्न तथ्यांकले बताएका छन्। अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीको अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वभर २३ करोड ६० लाख व्यक्ति क्यान्सरबाट पीडित हुनेछन् जुन संख्या प्रत्येक तीन व्यक्तिमध्ये एक जना क्यान्सरको बिरामी हुन आउछ। त्यसैले सबैले क्यान्सरसम्बन्धी जान्न अत्यन्त आवश्यक छ।
प्राकृतिक नियमअनुसार शरीरमा अर्बौं संख्यामा कोषिकाहरु बन्ने र बिग्रने क्रम चलिरहेको हुन्छ। यसै क्रममा विभिन्न प्रकारका वातावरणीय विकारको असरले प्राकृतिक नियम तोडिन पुग्छ। सामान्य भाषामा भन्दा कोषिकाहरु नियन्त्रण बाहिर पुगेर बढ्न थालेको अवस्थालाई क्यान्सर भन्न सकिन्छ।
क्यान्सरले गर्दा अर्कै प्रकारका कोषिकाहरु बन्ने क्रम सुरु हुन्छ। क्यान्सर लागेपछि कोषिका बढाउने तत्वले कुनै नियम मान्दैन र आफ्नै सुरले बढ्दै जान्छ। तर मानव शरीरबाट आफूलाई चाहिने सबै तत्वहरु भने खपत गर्दै जान्छ।
अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीले लामो अध्यनपछि क्यान्सरका लक्षण प्रकाशित गरेको छ। यीमध्ये कुनै पनि लक्षण देखापरेमा क्यान्सर भएको हुन सक्छ:
– त्यसैले क्यान्सरजन्य कारक तत्वबाट पर बस्न सकेमा यो रोगबाट बँच्न तथा टाढा रहन सकिन्छ।
– रोगको प्रकृति अनुसार हार्मोन र बायोलोजिकल प्रोडक्टअनुसार पनि क्यान्सरको उपचार गर्न सकिन्छ।
त्यसैले यस वर्षको नारालाई सार्थक पार्न सबैले भनौं, ‘क्यान्सरका लागि म छु र लागिरहनेछु।’
एमसीसीका ६ मध्ये चार सर्त कार्यन्वयन, उपाध्यक्ष ब्रुक्स काठमाडौँमा
पहिलो पल्ट युवती मिडियामा : भिडियो सहित (पाँचथर भ्रुण ह*त्या प्रकरण)
आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथी भरुवा बन्दुक पड्काए पछी ……
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार १८:१० October 11, 2019 Naya Kuro